Thwebula Hearthstone 3.0.9791 – Android – Vessoft
Le software adingekayo Battle.net ukugijima kahle
Hearthstone – a collectible game card wadala ngesisekelo the yonke Warcraft. The eziningana izinhlamvu edume amakhono siqu futhi siqu iqoqo zabo ikhadi lapho wenabisa ngesikhathi umdlalo, ziyatholakala umdlali. Hearthstone iqukethe Gameplay izindlela eziningi kuhlanganise imincintiswano nabanye abadlali, Duels enkundleni futhi ukudlula Adventures atholakale nobunzima obuhlukahlukene. Ekuqaleni abadlali beqembu ukuthola eziningana amakhadi okungahleliwe ezahlukene mana izindleko ukusetshenziswa kwabo futhi uthole amakhadi amasha kanye mana amakristalu sinyathelo esisha ngasinye. Hearthstone has amakhadi amaningi izici ezahlukene kanye nezici ezingaba kakhulu ukushintsha inkambo the game. Futhi lenza imisebenzi ehlukahlukene umdlali uhola legolide lapho kungenzeka ukuthenga amasethi ephelele amakhadi noma i ukufinyelela enkundleni.
The iqoqo izindlela futhi amaqhinga for ukunqoba
Different Gameplay izindlela
Inani elikhulu cards
The umncintiswano simo the best
Amazwana on Hearthstone:
Hearthstone Ahlobene software:
English, Afrikaans, Українська, Français... Tango 3.26.211814